[တရားဝင်] dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Extraction: Broken ကို Android ကနေဒေတာများကို Recover
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Extraction (ပျက်ဆီးနေသောစက်ပစ္စည်း)
ကျိုးပဲ့ကို Android device များအတွက်ကမ္ဘာ့ 1st data တွေကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဆော့ဖ်ဝဲ။
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများနှင့်ပိုပြီး Recover ။
Samsung ရဲ့ Galaxy Device များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပျက်စီး device ကိုသို့အရသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုပြန်ရနိုင်တယ်။
System ကို Crash
ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက် Broken ကို Android ကနေဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူ
အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများထောက်ခံနေကြသည်မတော်တဆသင့်ရဲ့ Android device ကို၏မျက်နှာပြင်ပျက်စီးလိုပဲ, မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်ပေါ်မှာဘာမျှမပြသထားတယ်မရှိ, သော့ခတ်မြင်ကွင်း password ကိုမေ့လျော့က USB ဒီဘာဂ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း, အမည်မသိအကြောင်းပြချက်များအတွက်စနစ်သို့မရနိုငျ ထိမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုနှင့်ပိုပြီး။
သငျသညျ recover လုပ်ဖို့ရာကို item ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်သင်, သင့်ရဲ့ device ကိုဒေတာ scan နဲ့ preview ကိုဤကျိုးအန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ၏အခမဲ့အစမ်းဗားရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
Android ပေါ်မှာ SD ကတ်ထဲကနေ recover
အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကဒ်မသာ, ဒီကျိုးအန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုလည်းကျိုးစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ SD ကဒ်ကနေဒေတာတွေကို scan နှင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။
ကျိုးပဲ့ Android ထုတ်ကုန်ကနေပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ဖိုင်တွေကို
သငျသညျအကြာတွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး, ကွန်ပျူတာမှ CSV ဖိုင်, HTML နဲ့ VCF ပုံစံများဖြင့်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူစာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အကှနျပြူတာက HTML format နဲ့သင့်ရဲ့ကျိုးပဲ့ Android ကိရိယာပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျများသိမ်းဆည်းပါ။ ဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများ၏အခြားမျိုး, သင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျအတိုင်း, သင်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
လောလောဆယ်ဒီအကျိုးအန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုက Android devices တွေကိုတခြားအမှတ်တံဆိပ်မှအမျှထိုကဲ့သို့သောစတာတွေက Galaxy S ကစီးရီး, က Galaxy Note ကိုစီးရီးအဖြစ် Samsung ကဖုန်းများနှင့် tablet စာရေးများအတွက်ဿုံအလုပ်လုပ်တယ်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ ဒါဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအတွက်အလွန်မကြာမီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကကျိုးအန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုလုံးဝကိုဖတ်သာဖြစ်ပါသည်ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို
Note3မှတ်ချက် 4, Note4ကို Edge, မှတ်ချက် 5, မှတ်ချက်5ဆိုပြီး, မှတ်ချက် 8, Note II
S3 ကို, S4 ကို, S4 Active, S4 ကို LTE-A, S4 Mini, S5 တွင်, S5 ကိုဆိုပြီး
Samsung ၏ Galaxy Tab ကို
Tab ကို27, Tab ကို Pro ကို 10.1, Tab ကို Pro ကို 8.4, Tab S ကို 8.4, Tab2 10.1
ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများစာရင်းကို preview >>
Windows ကို 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP ကို
5.0 Android နဲ့ဟောင်းတဦး
ဒေတာ recover ရန်သင့် device ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
ဒေတာ recover ရန်သင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ် scan
သင့်ရဲ့ကျိုးပဲ့ကို Android ကနေဖိုင်တွေကယ်တင်ဖို့။
စိတ်ကိုတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သင်၏ပျောက် data တွေကို Recover ။
အသက် 30 နေ့ရက်များသည်အခမဲ့ကြောင့်ကြိုးစားပါ!
device ကိုပေါ်တွင်သင်ချင်တယ်ဆိုကို item Recover
မှာအားလုံး device ကိုအပေါ်သင့်ရဲ့ဒေတာမှမဟုတျအန္တရာယ်
လူတိုင်းသုံးစွဲဖို့အဘို့အလိုလို interface ကို
ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့များအတွက် software ကိုကြိုးစားပါ
ဟုတ်ကဲ့! Wondershare ဒေါက်တာ Fone ပါ! (ဓာတျပုံ၌) ငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ဒီလိုကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလုံလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး!
Excellent က Android ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဖျဝဲ
ငါသည်ဤဒါနဲ့ format တစ်ခုအပြီးငါ့အမေရဲ့အက Samsung Galaxy ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှ recover နိုင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
မဿဲ Trompf အားဖြင့်
ကျွန်မမတော်တဆပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံအပေါ်ကြိုးစားကြ 's \_ ပုံငါ့သမီးဖြစ်ကြ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးညဥ့်ငါ့အကို Samsung S3 ကိုလက်မှလုယူနဲ့ကျွန်မဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်။ ငါသည်ဤအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆုတောင်းခဲ့ !! ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာယူပေမယ့်ကျွန်မနောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့ကိုကျော်လုပ်လိမ့်မည်ဟုငါမည်သူမဆိုဤထုတ်ကုန်အကြံပြုမယ်လို့ !! နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမင်္ဂလာဆောင်တစ်ဦးကအလွန်ပျော်ရွှင်မိခင်ဖြစ်၏။
Broken ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်ဖုန်းအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ရန် Recover လုပ်နည်း
Broken ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်ဖုန်းသုံးစွဲနည်း2နည်းလမ်းများ
Broken Android ဖုန်းများအတွက်ကနေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover လုပ်နည်း
တစ်ဦး Broken ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်ဖုန်း Unlock လုပ်နည်း
လုပ်နည်း Backup ကို Broken ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်ဖုန်း
Broken ကို Samsung ဖုန်းများအတွက်ကနေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို Recover လုပ်နည်း
အုတ်က Android ဖုန်းနှင့် Tablet များ Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
Samsung ရဲ့ Galaxy က Black Screen ကို Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
6000+ ကို Android Device များထံမှဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ Recover ။